Ku hayso hantiyadaada dhijitaalka iyo fiat walletyo badan. Sawir cad ka hayso lacagahaaga.
Markiiba fur Koontooyinka Ganacsiga Demo ama Dhabta ah ee lacag walba oo la ogolyahay.
Markiiba ku maalgeli walletyadaada walletyadaada sarifka ama shaqsiga ah.
Kala bax lacagaha mid walba oo koontooyinkaaga 24/7. Ka wareeji lacagaha Koontada Ganacsiga ee ku wareeji eWallet yadaada.
Fiiri taariiqda lacag dhigistaada oo dhan, kala bixitaanada iyo wareejinada. Faham sida barnaamijyadaada ganacsiga yihiin.
Fiiri dhammaan dalabyadaada ganacsiga. Dib u eeg howshaada ganacsiga si aad sare ugu qaadid waxqabadkaaga.
Fur Tikidka ama i-meel noogu soo dir support@gt.io ama nagala soo xiriir dhinaca Sheekada Tooska ah.
Daar ansixinta 2-xaqiijin adiga oo isticmaalayo Xaqiijiyaha Google. Kordhi amniga koontadaada.
Maarey eWallet yadaada
Fiiri haraaga eWallet yadaada
Si toos ah ugu shub hantida dhijitaalka mid walba oo eWallet yadaada ah
Si toos ah wax uga la bax mid walba oo eWallet yadaada
Maarey dhammaan koontooyinkaaga ganacsiga
Fur koontada demo oo mid walba oo lacagaha la ogolyahay
Furo koontada dhabta ah oo mid walboo lacagaha la ogolyahay
Koontada ganacsiga way furmeysaa isla markiiba
Markii aad furtid koontada ganacsiga waxaad ka dib ku wareejin kartaa lacagaha eWallet yadaada
Maalgeli eWallet yadaada
Ku shubo hantidaada dhijitaalka ama fiat Wallet yadaada gaarka ah ee eWallet yadaada halkaan.
Markii lacagaha ay gasho eWallet yadaada halkaan, waxaad kadib ku wareejin kartaa koontadaada ganacsiga quseeyo.
Maareey kala bixitaanadaada
Ka dooro Koontada Ganacsigee loogu wareejinayo lacagaha eWallet.
Wareejinada ka imaanayo koontada Ganacsiga Bitcoin waxay ka muuqaneysaa Bitcoin eWallet, wareejinada Koontadaada Ganacsiga Ethereum waxaad ku arkeysaa Ethereum eWallet, iyo sidaas.
Markii codsigaaga la bixista la ansixiyo, waxaad ku arkeysaa lacagahaaga eWallet kaaga quseeyo.
Codsiyada kala bixitaanka waxay qaadataa 10 daqiiqo illaa 48 saacadood oo lagu ansixinayo, waxayna ku xirantahay xaaladaha akoonka ganacsigaaga (boosaska furan, sharuudaha deynta shirkada dullaalka, iwm) iyo qiyamka kala bixitaanada ee aan hadeer ka baaran dagnay.
Dib u eeg lacag dhigashooyinka, Kala bixitaanada iyo Dalabyada
Dib u eeg taariiqda buuxdo ee lacag dhigashadaada
Dib u eeg taariiqdaada buuxdo ee kala bixitaanadaada